Ny finoana sy ny tantara (Heb. 11:1-40)
Tsy mitoka-monina tsy akory isika. Misy fiantraikany en amin'ny hafa, araka izany, ny safidy ataontsika fa tsy eo amin'ny tenantsika ihany. Tahaka izany koa, nanana hery manova fiainan'olona maro ny fiainan'ireo vahoakan'Andriamanitra tao amin'ny TT. Hitantsika ao amin'ny Heb. 11 ny fomba nanovan'ireo mahery fon'ny finoana ny fiainan'ny olona marobe.
Vakio ny mombamomba ireo olo-malazan'ny finoana ao amin'ny Heb. 11:1-40. Inona ny lesona azontsika tsoahina avy amin'ny fiainan'izy ireo?
Enôka : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samsôna : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ny finoana dia tsy hoe mino olona na zavatra iray fotsiny, fa manao asa mifandraika amin'izany. Finoana miasa izany, izay azo antsoina hoe fahamarinana. Izany asa vokatry ny finoana izany no manova ny tantara. Miankina amin'ny fitokiana amin'ny Tenin'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ireny asa ireny. Niasa tamim-pinoana i Nôa raha nanamboatra ny sambofiara, natoky ny Tenin'Andriamanitra mihoatra noho ny fanandramana sy ny fisainan'olombelona izy. Tsy mbola nisy orana mihitsy teto ambonin'ny tany talohan'ny safodrano, ka nambaran'ny olona vokatry ny fanandramana niainany sy ny fieritreretany fa tsy hisy ny safodrano. Natoky an'Andriamanitra anefa i Nôa ka nankatò Azy. Voaro tamin'ny safodrano ireo olona tao anatin'ny sambofiara. Izany fankatoavany an'Andriamanitra izany no hany antony mbola mampisy olombelona eto an-tany amin'izao fotoana izao. I Abrahama indray, izay nantsoina hoe Abrama teo aloha, dia nandao an'i Ora tany atsimon'i Mesôpôtamia, ilay tanàna kanto indrindra teto an-tany tamin'izany andro izany. Tsy nahalala izay hitondran'Andriamanitra azy akory izy raha niala tao, kanefa nisafidy ny hanaraka ny Tenin'Andriamanitra. Nifidy ny ho mpiandry ondry i Mosesy ka nitarika ny vahoakan'Andriamanitra ho any amin'ilay tany nampanantenaina toy izay ho mpanjakan'i Egipta izay fanjakan-dehibe natanjaka indrindra tamin'izany andro izany. Nitoky tamin'ny feon'Andriamanitra izay niresaka taminy avy tao amin'ny roimemy nirehitra izy. Nanapa-kevitra ny hatoky ny tatitra momba ny fanafahan'Andriamanitra i Rahaba ka niaro ireo mpisafo tany roa lahy, nanjary tafiditra tao amin'ny tetiaran'i Jesôsy izy. Afaka manova ny fiainan'ny olona marobe amin'izao fotoana izao sy amin'ny hoavy tokoa ny safidintsika!